Nke a dị n'ozi a kụpụrụ site n'aka mịnịstịrị steeti ahụ na-ahụ maka ihe na-eme na mba ofesi, ihe aka mepụtara n'ala anyị, omenala na njem nlegharị anya, ma bụrụkwa nke kọmishọna minịstịrị ahụ, bụ oriakụ Sally Mbanefo binyere aka na ya.
Ya bụ ozi bụzịkwa nke e sitere na ya wee kpọkuo ndị ndu obodo dị iche iche, ndị eze ọdịnala nakwa ndị ọzọ na-ahazi ihe mmemme dị etu ahụ, ka ha wetara mịnịstịrị ahụ aha obodo ha, aha ihe mmemme ahụ, ụbọchị na oge e ji eme ya, ebe a nọ eme ya, na ihe ndị ọzọ gbasaara ya bụ ihe mmemme.
Dịka o siri kọwaa, ihe mmemme ndị ahụ a na-ekwu maka ya gụnyere iti mmọnwụ, mmemme ịgba ọfala, mmemme ịgụ ahọ, mmemme ọdịnala na ọtụtụ mmemme ndị ọzọ dị iche iche obodo na-achịkọba iji dọlata ndị mmadụ ụlọ n'ọnwa Ekeresimeesi ahọ ọbụla. Ozi ahụ mekwara ka a mara na ebumnobi nke ahụ bụ iji dekọta ihe mmemme niile ndị a n'akwụkwọ, ma nyekwara ndị obodo ahụ aka kwàlite ya bụ ihe mmemme n'ogoogo mba ụwa, bụkwa nke ga-enye aka ịkwàlite steeti ahụ dịka ebe njem nlegharị anya n'ala anyị, ma sikwa n'ụzọ dị etu ahụ wulite omenala, ọnọdụ akụnụba na ọdịmma nke steeti ahụ n'izugbe.
Onye ọbụla chọkwazịrị ịmatakwu ma ọ bụ jụọ ajụjụ banyere nke ahụ ka e kwuru ka ọ kpọtụrụ akara ekwentị a: 0908 195 3537.